जिम्मेवार पत्रकारिताको खाँचो - Pradesh Today जिम्मेवार पत्रकारिताको खाँचो - Pradesh Today
पुष ०३, २०७५ सपना बोहरा
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले २६औँ स्थापना दिवस तथा वार्षिक साधारणसभा मनाएको छ । पछिल्लो समयमा पत्रकारिता र पत्रकारहरुको बारेमा विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । पत्रकार र पत्रकारिताको विषयलाई स्थापना दिवससँग जोडेर पत्रकार अगुवा तथा नेताहरुसँग वर्तमान पत्रकारिताको अवस्थाको बारेका बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ । हामीले प्रदेश टुडेको साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउड टेबलमा पत्रकारिता क्षेत्रमा आउने विभिन्न समस्या र नीति, ब्यवस्था र अहिलेको पत्रकारिता कस्तो र के सुधार आवश्यक पर्छ ? भन्ने विषयमा पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।
समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने पत्रकारिता आवश्यक
पत्रकारिताको अवस्था समाजभन्दा र समग्र राष्ट्रको अवस्थाभन्दा फरक छैन् । यही समाजबाट पत्रकारिता आएका व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले समाजमा भएका विभिन्न समस्या र चुनौतिहरु छन् । र, अहिले पत्रकारितामा क्षेत्रमा कुरा गर्दा संख्यातमक ढंगले बृद्धि भएको छ । छापा पत्रकारिता झण्डै हजारको हाराहारीमा अखबारहरु निस्किन्छन् छन्, एक हजार तीन सयभन्दा बढी अनलाईन सूचिकृत भएका छन् । एक सय पचास जति टेलिभिजन च्यानलहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्, सात सयभन्दा बढी रेडियो एफएमहरु सञ्चालनमा छन् । पत्रकारितामा काम गर्नेहरुको संख्या पनि उल्लेखनीय रुपमा बढ्दै गएको छ । संख्यात्मक वृद्धि जुन ढंगले भएको छ । गुणात्मक ढंगले वृद्धि हुन सहिरेको छैन् । यहाँका काम गर्ने कर्मचारी, पत्रकारहरु र कामदारहको उचित श्रम अभ्यास, उनीहरुको उचित पारिश्रमिकलगायतका व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन् । उनीहरुको भौतिक सुरक्षाको अवस्थामा पनि अझै सुधार हुन सकिरहेको छैन् । अहिले पनि कि त सेन्सर सिपको अवस्थामा रहनुपर्ने कि त समाचार सामाग्री लेखियोे भने धम्की आउने अथवा कुनै खालको असर पर्ने खतरा आउने होकी भन्ने अझै पनि कायमै छ ।
त्यसैले पेशागत रुपमा असुरक्षा, भौतिक रुपमा पनि असुरक्षा गुणत्मक रुपमा पनि बृद्धि गर्न नसक्नु अवस्थामा पनि नेपालको पत्रकारिता अवस्थामा रुमलिरहेको छ । तर, यति हुँदाहँुदै पनि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले यो समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि, राष्ट्रको विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि देशको समृद्धिको लागि सकारात्मक भूमिका नै खेलिरहेको छ । केही एक दुई पत्रकारहरुले केही पत्रकारिताको नाममा अलिकति आचारसंहिता मिचिए पनि पत्रकारिता गफ गरेर अरु कारिता गरेपनि समग्र आम पत्रकारहरुले जे भूमिका निभाउनुभएको छ, एकदम सकारात्मक भूमिका छ निभाउनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । अबको पत्रकारिता भनेको समाजलाई मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने । देशलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ । बिगतमा हामीले लोकतन्त्र भएन भनेर लोेकतन्त्र स्थापना गर्नको लागि लोकतन्त्र पत्रकारितालाई केन्द्रित ग¥यो । संविधान बनाउनु पर्छ भनेर हामी त्यहाँ केन्द्रित भयाँै । त्यसपछि चुनाव सफल हुनुपर्छ । चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ केन्द्रित भयो । अब विकास र समृद्धिमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । अब हाम्रा समाचार सामाग्रीहरु राजनीतिभन्दा अन्य खाले विषय भन्दाखेरी कसरी यो देशको विकास गर्न सकिन्छ, कसरी समृद्ध हासिल गर्ने, कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ? कसरी राष्ट्रको माथिल्ला तहमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई सही ढंगले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर निगरानी गर्ने र उनीहरुलाई पनि बाटो देखाउनु र खबरदारी गर्ने किसिमको अबको पत्रकारिता हुनुपर्छ
अहिलेको पत्रकारिता लोकतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास भइरहेको छ । यो अभ्यास नेपालमा मात्रै भएको छ । लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको यहाँका पत्रकारहरु सहन सक्दैनन् । खरो रुपमा पत्रकारहरुले सडकमा उत्रिन्छन् । यो नेपालको पत्रकारहरुमा मात्रै साहसी कदम हो । लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहार यहाँ कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन् । यो अभ्यास विश्वको अन्य देशमा छैन् । तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप वा अन्य केही समस्या प¥यो भने सडकमा जाने साहस र आँट नेपाली पत्रकारितामा प्रचलन देखिएको छ । नेपालको लोतान्त्रिक यो समाजमा पत्रकारिताको सवालमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । पछिल्लो समयमा पनि प्रेस स्वतन्त्रलाई संकुचित बनाएर स्वतन्त्र पत्रकारितालाई केही अंकुश लगाउने काम भएको छ । त्यसको विरुद्धमा पत्रकारहरु एक छौँ ।
हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ती कसैले पनि अंकुश लगाउने काम गर्ने छैन् । त्यसको विरुद्धमा हामी खरोरुपमा उत्रिने छौँ । हाम्रो आफ्नै प्रेस काउन्सिल छ । पत्रकार महासंघ छ र हाम्रो पत्रकारिताको आफ्नै आचारसंहिता छ । पत्रकारिताको विषयमा कानुनले के लेखेको छ भन्दा पनि पत्रकार आचारसंहिताले के लेखेको छ ? भन्नेमा केन्द्रित हुन पत्रकारहरुलाई आग्रह गर्छु । एउटा निर्भिक पत्रकार भएर पत्रकारिता गर्नुस् । सामाजिक न्याय दिलाउनको लागि पत्रकारहरुले अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ । पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिलगायत अन्य सेवा सुविधाको लागि पत्रकार महासंघले योजना बनाईसकेको छ । अब छिट्टै नै सञ्चालन हुन्छ । सबै पत्रकारहरुलाई त्यो योजनाले प्रोत्साहन गर्छ होला भन्ने विश्वास छ
पत्रकारिता रहरले गर्ने पेशा होइन
नेपाल पत्रकार महासंघको यो बर्ष मनाउन लागेको स्थापना दिवस २६औँ हो । औपचारिक रुपमा दाङमा स्थापना दिवस मनाउन थालेको चौथो कार्यसमितिदेखि हो । त्योभन्दा पहिले महासंघको आफ्नो कार्यालयसमेत थिएन । म चौथो र पाँचौ कार्यसमितिमा सचिव र छैठौ कार्यसमितिमा सभापति भएको हो । छैठौ कार्यसमितिले महासंघको भवन सुरुवात गरेको हो । अहिले महासंघ साधन सम्पन्न भएको छ । यो खुशीको कुरा हो । स्थापना दिवस पहिला तामझामका साथ हुँदैनथ्यो । सदस्य संख्या पनि कम थियो । पुरस्कार स्थापनाको सुरुवात पनि पाँचौ कार्यसमितिबाट भएको हो । पहिला जति पत्रकार महासंघका सदस्य थिए सबै क्रियाशील थिए । अहिले महासंघको सदस्य २६१ पुगेको छ । क्रियाशील पत्रकार खोज्ने हो भने मुस्किलले ६१ जना भेटिन्छन् होला । किन क्रियाशील हुन सकेनन् त ? यसका धेरै कारण छन् । पुरस्कार वितरण पनि पछिल्ला समयमा आएर भागबण्डामा वितरण हुने गरेको छ । अझ पत्रकारिता नगरेको तर पत्रकार महासंघको सदस्य भएको मानिसले समेत पुरस्कार र सम्मान पाउन थालेका छन् । पुरस्कार यस्तो हो, दिने संस्था र पाउने ब्यक्तिले भन्दा पनि समाजले यो मानिस पुरस्कृत भएछ राम्रो भएछ भन्ने हुनुपर्दछ । अहिले त यस्तो भयो पुरस्कृत हुने ब्यक्तिले. पुरस्कृत र सम्मानका प्रमाणपत्र लिएर घर जाँदा घरकै परिवार अचम्म मान्ने जस्तो भएको छ ।
पत्रकारिता रहरले गर्ने पेशा होइन । पत्रकारिता नगर्नेहरुले महासंघको सदस्यता त्याग्नु पर्दछ । पत्रकारिता नगर्ने सवारी साधनमा प्रेस लेखेर गुड्दा आम मानिसहरुले के भन्लान् ? त्यो कुरा पत्रकारिता नगर्ने पत्रकारहरुले स्वयम् मनन् गर्न सक्नु पर्दछ । महासंघले पत्रकारहरुलाई समयानुकूल विभिन्न किसिमका तालिमको आयोजना गर्दै जानुपर्दछ । क्रियाशील पत्रकारहरुले पनि खोजी पत्रकारितामा बढी समय दिनुपर्दछ । प्रहरी प्रशासनको अनुकूल हुने खालको समाचारभन्दा आवाजविहीनको आवाज पत्रकारहरुले बाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ, त्यो हो पत्रकारिता । अर्कोतर्फ मिडिया सञ्चालकहरुले पनि पत्रकारहरुलाई राज्यले तोकेको पारिश्रमिक दिनुपर्दछ ।
क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ
दाङको पत्रकारिता सन्तोषजनक भएको मैले लिएको छु । यहाँको पत्रकारिता सन्तोषजनक नै छ । पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि तालिमको आवश्यक मैले देखेको छु । त्यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको मैले देखेको छु । र पत्रकार महासंघ दाङले आफ्नो योजना पनि बनाई सकेको अवस्था छ र पहिले पनि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु गरिसकेको छ । पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि विषयगत तालिमहरु, टट्को तालिमलगायत विभिन्न विषयगत तथा विधाको तालिमहरु सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाएका छाँै । पत्रकार महिलाहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भनेर विशेष प्याकेजका कार्यक्रमहरु पनि छन् । फेलोसिपका कुराहरु पनि छन् । भैपरी आउने कुराहरुमा जस्तो पत्रकारहरुलाई चाहिने सञ्चार उपकरण खरिदमा पत्रकार महासंघको तर्फबाट सहयोग गर्ने योजना पनि छ । पत्रकारिताको विकासको लागि र आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि पत्रकार स्वयम् नै जिज्ञासु र जागरुक हुनुप¥यो । अर्कोतर्फ त्यो किसिमको वातावरण निर्माणको लागि पत्रकार महासंघले गर्छ ।
अर्को कुरा पत्रकार महासंघको निर्णय एकलै गरियो भन्ने संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्षज्यूहरुबाट गुनासो आयो । हामीले कार्यसमितिको छलफलबाट नै निर्णय गरेका छौँ । अहिलेसम्म छलफलबाट भएका निर्णयहरु कुनै पनि कार्यसमिति सदस्यले अस्वीकार, नोट अफ डिसेनट लेखेका छैनन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले गर्ने हरेक गतिविधिको कार्यसमितिको छलफलबाट नै निर्णय गरिएको अवस्था छ । र, आगामी दिनहरुले महासंघले गर्ने निर्णयहरुमा संस्थापक र पूर्व अध्यक्षज्यूहरुलाई छलफलमा सहभागी गराएर, सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने छौँ । पत्रकार महासंघले पत्रकारहरुको हकहित, पेशागत सुरक्षा र यहाँको पत्रकारिताको विषयमा नै काम गरिरहेको छ ।
सस्तो प्रचारको लागि पत्रकारिता
पूर्व अध्यक्ष प्रेस काउन्सिल
पत्रकारिताको क्षेत्रमा दशकौ विताई सक्यो । राजतन्त्रविरुद्धको पत्रकारिता गरियो । शासकहरुको थिचोमिचो विरुद्धको पत्रकारिता गर्दै आयौँ । मैले राजतन्त्र, निरकुंश भोगेको मान्छे । पत्रकारिता क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि धेरै संघर्ष गरियो । एक किसिमले एउटा युग पार गरिसकेको छु । तर अहिलेको पत्रकारिता देखेर विरक्त लागेर आउँछ । हामीले पत्रकारिता गर्छाै तर सस्तो प्रचारको लागि पत्रकारिता भईरहेको मैले पाएको छु । सबै पत्रकारलाई भनेको होइन् । कोही राम्रा पत्रकारहरु पनि हुनुहुन्छ । तर कुनै–कुनै पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका विकृतिले मनमा पीडा हुँदो रहेछ । एउटा पत्रकार सस्तो प्रचारको लागि पत्रकारिता गर्ने हो भने त्यो पत्रकार लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन् । त्यसकारण हामीले निष्पक्ष भएर पत्रकारिताको मुल्य मान्यतामा रहेर काम गर्नुपर्छ ।
समावेशी लोकतन्त्रलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छाँै भन्नेमा हामी लाग्नुपर्छ । तर कोही कतै लोकतन्त्रलाई असफल पार्नको लागि कुण्ठित र समाप्त पार्नको लागि पत्रकार र सञ्चारमाध्यम प्रयोग भइरहेको छ । त्यो विषयमा हामी सचेत सजग हुनुपर्छ । पत्रकारिता गर्न जानियो भने पत्रकार र पत्रकारिताको भविष्य उज्ज्वल छ । मलाई पत्रकार महासंघ दाङको अवस्था देखेर ज्यादै नरमाइलो लागिरहेको छ । हामी पत्रकार महासंघको संस्थापक छाँै । साधारण सदस्य पनि छौँ, तर पत्रकार महासंघ दाङले आयोजना गर्ने हरेक गतिविधि र निर्णयहरुमा हामीहरुलाई सहभागी बनाइदैन्, खबर गरिदैन् । यो पत्रकार महासंघ दाङको ठूलो कमजोरीको रुपमा मैले लिएको छु । पत्रकार अनि पत्रकारिताको विषयमा कहिले छलफल, चिन्तन् मनन् गरेको मैले अहिलेसम्म पाएको छैन् । पत्रकारिता कस्तो हुन्छ, हुनुपर्छ ? भन्नेमा कुनै छलफल नै भएको छैन् भन्दा पनि हुन्छ । यहाँको संस्थापक, पूर्व अध्यक्षहरुको महत्व नै ठानिदैन् । हरेक निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने समयमा संस्थापकहरुलाई बोलाएर टुंगो लगाउनु पर्ने तर त्यसो भएको देखिदैन् । आजको दिनसम्म संस्थापकहरुलाई बोलाएर, सल्लाह लिएको, छलफल गराएको सम्झना छैन् । पत्रकार महासंघको एकै पटक औपचारिक कार्यक्रममा बोलाइन्छ । त्यहाँ तितामीठा कुरा हुन्छन्, त्यही सकिन्छ तर यो गलत हो । पत्रकार महासंघ दाङका संस्थापकहरु अझै पनि साधारण सदस्य छौँ । त्यो विषयमा नेतृत्वहरुले बुझ्नुपर्छ, ध्यानार्षण हवस् । हरेक निर्णय गर्नुभन्दा पहिले संस्थापकहरुलाई बोलाएर यो ठिक हो की बेठिक हो भनेर छलफल गरेको खै ? मैले भन्ने खोजेको कुरा के हो भने बडो चिन्तन मनन् र मित्रताको ढंगले पत्रकारिताको हकहित मुल्य मान्यताको क्षेत्रमा काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । आईपरेका हरेक समस्याहरु मिलेर समाधान गरौँ । पत्रकारहरुको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो भने हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ । सबै पत्रकारहरु जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने हो भो हामी संस्थापकहरु सन्तोषजनक हुन्छौँ ।
पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ
संकल्प महिला सञ्चार संस्था, दाङ
समग्र पत्रकारितालाई हेर्ने हो भने जिल्लामा उल्लासमय पत्रकारिता भएको जस्तो देखिन्छ । तर हामी फेसबुके पत्रकारिता बढी भयाँै कि भन्ने पनि लाग्छ । खोज पत्रकारिता हराउँदै गएको छ जस्तो लाग्छ । गहन अध्ययन गरेर खोजमूलक पत्रकारिता हराउँदै गएको जस्तो लागि रहेको छ । मिडिया सञ्चालकहरु पनि खोज पत्रकारिताको लागि कुनै सहयोग गरिरहेको पाइदैन् । अहिलेको पत्रकारिता फलानो कार्यक्रमको उद्घाटन गरियो, समापन गरियो भन्ने समाचारमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । समाजमा रहेको धेरै विषयलाई उठाउनु पर्ने अवस्था छ । ति विषयमा गहन अध्ययन गरिरहेको पाइदैन । पछिल्लो समयमा व्यवसायीक पत्रकारिता पनि हराउँदै गएको होकी जस्तो लागिरहेको छ । किनभने पत्रकारितामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न भनेर पलायन भएको अवस्था छ । अन्य पेशालाई मुख्य बनाएर पत्रकारितालाई पार्ट टाइमको जागिरी बनाउने प्रचलन बढ्दै गएका कारण पनि पत्रकारिता पत्रकारिता जस्तो देखिदैन् । पत्रकार महासंघ दाङले पनि पत्रकाहरुको बारेमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन् जस्तो लाग्छ । पत्रकार महासंघले पत्रकाहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने हो तर त्यो विषयमा काम नगरेको जस्तो मैले महशुस गरेको छु ।
जिल्लामा पत्रकारहरुको अवस्था कस्तो छ ? उचित पारिश्रमिक पाएका छन् कि छ्रैनन्, उनीहरुले समयमै पारिश्रमिक पाए की पाएनन् भन्ने विषयमा पत्रकार महासंघले कुनै चासो देखाएको पाइदैन् । त्यति मात्रै पत्रकार महासंघ पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम पनि छैनन् । पत्रकारहरुलाई समय सापेक्ष तालिमको आवश्यक पर्छ, त्यो विषयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर पत्रकार महासंघले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सम्मान र स्वागत गर्ने कामबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि गरेको जस्तो मैले पाएको छैन् । पत्रकारितालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुनै चासो गएको छैन् । पत्रकारितामा केही विकृति पनि बढ्दै गईरहेको छ, त्यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हो तर किन मौन छ ? मलाई त चित्त नै बुझिरहेको छैन् । यहाँ न कुनै पत्रकारहरुहरुको पेशागत सुरक्षाको लागि केही काम भएको छ न त पत्रकारहरुको विमा नै भएको छ । पत्रकारहरुको श्रमजीवि ऐन पनि लागूभएको छैन् । जसको कारण पत्रकारितालाई पार्ट टाइम पेशाका रुपमा अधिकांस पत्रकारहरुले लिइरहेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । र पेशागत सुरक्षाका ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।